Chii Chinonzi Chikapa Mumba (Part 1) Chii Chinonzi Chikapa Mumba (Part 1)
Vara rokuti chikapa rinoita sokuti rakabva kuMalawi kwarinoreva zvinhu zvinodzidziswa vasikana kune umwe mutambo unohi Chinamwari wekuyarusa vasikana kuti vachinzi vave mhandara.
Mitambo yakadai inoitika kwakawanda asi kazhinji inoitigwa vakomana kuti vachekwe ganda rechombo vave namakore 13-14. MaVhenda emuZimbabwe vanozviita. Mazulu, MaSwazi, maTsvana, vanozviita. Asi sokuziva kwangu vekuMalawi chete ndivo vanoitira vasikana. Hameno kana pane anoziva zvimwe atiudzewo.
Chikapa unyanzvi hwekushandisa chiuno pakurhojana nomurume. Murume anokoira mukadzi achiita chikapa. Saka tongoti chikapa kukoira kwemukadzi asi vakadzi hatibvumigwi kuti tihi tiri kukoira saka vakatipa rimwe shoko rokuti ita chikapa murume achikoira. Asi pane nyaya dzakawanda ipapo. Zvese zvinotanga ne ATTITUDE yako panyaya yokuvatana nomurume waunoitira chikapa. Sokuona kwangu, kune vaya vanongoti murume akumbira vomuvhurira, hazviiti kuti une murume wausina basa naye asinganaki asina basa newe kuti ungotanga kumuitira FREAK OUT pakuvatana.
Unenge une zvawakamurongera uye uri munhu akasununguka kana unaye, anokufadza moyo, anodawo kukurhoja. Ndipo unomukungira chiuno womupa zvese.
Chikapa kuwana RHYTHM yakakodzera pane zvamuri kuita. Ini sokuona kwangu Rhythm yekukoirana inopiwa nomukadzi kwete murume. Murume ukamurega achiita zvaanoda anongoti apinza ototanga kuita semota dziya dze FORMULA ONE kumhanya, ipapo iwe unenge uchida kunyatsohwa kuti murume ari mandiri, uye ari kunatyobayabaya nokukwizakwiza papi pacho mukati imomo, ndamubata, ndava naye mukati (Part of the deal for us is POSSESSION. When I have him inside me he is mine.) Ipapo iye anenge achida kutokudiridzira urume obva abuda ovata hope. Saka iwe basa rako kuderedza sipidhi yake kuti nguva yaanoita ari mukati iwande ugonakigwawo.
Rythm unoipa CONTROL nokusunga chombo nemasuru yomukati mechitubu kana kurerusa muviri zvichibva nokuti unoda kuti akasire here kana kuti aderedze sipidhi yake.
Murume akangohwa wachemerera otoda kukuzadza urume. Ukasadzidzisa murume wako kunonoka unogara wakapiwa chidimbu chokunakigwa.
Kana usina CONTROL yemasuru unotoita zvokutaura asi zvino murume haatereri. Ane AGENDA yeke ega. Toti wamubata wamupa Rythm yakanaka, kukoira kwenyu kwakasiyana. Munoti kana murume ari pamusoro iwe wakavhura makumbo iye ari pakati ari mukati, paanodzira achipinda iwe uri kusimudzira kugamuchira (OPPOSITE) Paunogamuchira ipapo usangoita wakati tasa uchingobaiwa pamwepo mukati. Unopota uchimheyesa chiuno LEFT and RIGHT, ukuwo uchigonyesa chiuno chombo chichimbopindawo neANGLE yakasiyanasiyana, asi uku RYTHM yako usina kuirasa.
Unotohwa uchikurungiwa sebota riri mupoto chombo chave mugoti, saka mafambire acho ndeawa, zvichibva pakushandisa chiuno kwemukadzi. Read The Complete Article At Mai Chibwe VekwaZimuto Chii Chinonzi Chikapa Mumba.